Azia Atsimo Atsinanana Avy Amin’ny Mason’ny Vorona? Andramo Ato Ny Hitan’ny Mpanamory Sambondanitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2016 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, नेपाली, Ελληνικά, Español, English
Firenena aziatika sy ny renivohiny. Google Maps.
Tsidiho ny tahiry azon'ny rehetra ampiasaina avy amin'ny National Aeronautics and Space Administration (NASA) dia hahita ny sarin'ireo renivohitra nopihan'ny mpanamory sambondanitra eny ampisidinana an'habakabaka ambonin'ny tany ianao. Ireo sary ireo dia hita ao amin'ny tranonkala “Tetezana fidirana mankao amin'ny Saripikan'ny tany nalain'ny mpanamory sambondanitra.”
Ny renivohitra tsirairay dia manana toerana malaza mampiavaka azy na toeram-pizahantany manintona olona mametraka azy ho tsy manam-paharoa. Vao maika aza miharihary kokoa ny fisongadinana [mg] ara-jeografikan'ireo tanàna maro rehefa jerena avy eny amin'ny lalan'ny zanabolana.
Ny renivohitr'ireo firenena aziatika atsimo atsinanana no anisan'ireo be sary nalaina sady malaza andehanan'ny olona indrindra eto amin'izao tontolo izao. Saingy tahaka ny ahoana moa ny endrik'izy ireo avy eny an-habakabaka? Andeha isika hitety ireo tanàna ireo amin'ny fomba virtoaly avy amin'ireo sary nalain'ny mpanamory sambondanitra ireo :
Ny renirano Chao Praya manavatsava an'i Bangkok, Thailandy. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Dili, Ranomasin'i Timor, Timor-Leste. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Bandar Seri Begawan, Brunei. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Nosy Selat Pandan sy Sentosa, Singapaoro. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Reniranon'i Mekong manavatsava an'i Phnom Penh, Kambodza. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Ny renirano Rangoon sy ny farihy Inya ao Yangon, tanàna lehibe indrindra ao Myanmar. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Faritra Metro Manila, Philippines. Hita amin'ny ankavanan'ny sarin'ny zanabolana ihany koa ny farihy Laguna. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Vinanin'ny renirano mena, Hanoi, Vietnam. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Seranam-piaramanidina Sultan Abdul Aziz Shah, Kuala Lumpur, Malaysia. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Vientiane, Laos. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA
Jakarta amin'ny alina, Indonezia. Sary nampindramin'ny vondrona jery lavitra sy siansan'ny tany, Foiben'habakabaka Johnson na NASA